NLD က သာမညပါတီကလေးပါ..၊
ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ထူထောင်ထားတဲ့
ဘယ်လုပ်ငန်းကို လက်ညှိုးထိုးထိုး ကြံခိုင်ရေးပါမစ်နဲ့
မသိတမျိုး သိတစ်မျိုး ပံ့ပိုးလုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုပဲကြည့်ပါ..၊
ပြည်သူက ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ အစိုးရကြီးတစ်ခုလုံး..
ကြိုတင်မဲဆိုတဲ့ ..ကမ္ဘာမှာ တရားအမျှတဆုံးမဲတွေနဲ့.
NLD ကလွှတ်တော်မှာ အရေအတွက်အနည်းလေးဆိုတော့..
ပြည်သူတွေရူးနေတယ်တို့ ..ဆိုတဲ့ သမိုင်းဝင်စကားတွေ..
ဧရာဝတီမြစ်ကို ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့ စူပါဘရိန်းပိုင်ရှင်တွေ..၊
တိုင်းပြည်ကို တစ်ခဏချင်း တိုးတက်သွားစေခဲ့တဲ့..သူတွေဆိုတော့..
NLD ပါတီထက် ကို..အဆပေါင်းအများကြီးအစွမ်းအစရှိပါတယ်ဗျာ..၊
အသက်ပြည့်တဲ့သူ ကဒ်ရတဲ့သူက ရှစ်သိန်းဆိုရင်.
သူတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ တိုးလိုးတွဲလောင်းအရေအတွက်က..
သိန်း (၂၀ )လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို..